Waa maxay masuuliyaddu? W/Q: Saciid Muuse (Ustaadka) | Laashin iyo Hal-abuur
Waa maxay masuuliyaddu? W/Q: Saciid Muuse (Ustaadka)
Waa maxay masuuliyaddu?
Mas’uuliyaddu waa hannaanka ugu wanaagsan oo ey nafi dastuur ka yeelato. In aad mas’uuliyad muujiso ayaad ku gaari kartaa dhammaan waddooyinka guusha. Taas caksigeeda waa qeyrul-mas-uulnimada, oo ah dayacaad iyo beylah ka dhalato fiirsasho la’aanta.
Qofka masuulka ah, waa mid ka dhax muuqdo bulshadiisa, magacna ku leh. Waa mid iyo had jeer feejigan kana digtoon waxyaabaha aan natiijadooda la mahdineynin. In yarba Alle ha ka dhigee, mas’uuliyad marka ey kugu jirto, waxaad tahay qof sabar leh, waxaana kuu fududaata waxyaabo badan, oo dadku culeys u arkaan.
Ninka Oromada ah ayaa markuu qaangaaro, waxaa loo kala dooraa laba arrimood, oo kala ah;
A. Inuu shan sano gaajo ku noolaado, waxii daqli ah ee soo galana u aruuriyo mustaqbalkiisa.
B. Iyo inuu waligiis gaaja ku noolaado, oo noloshiisa, uu cariiri ku dhammeysto.
Tan danbe ayuu ku tawakalaa,w aa haddii ey mas’uulnimo ku jirto.
Mas’uulnimaddu waa garaadka iyo caqliga oo la raaco. Waa kala saarasho xaqiiqada iyo qayaaliga, oo si hufan loo kala ogaado. Waxaa ka mid ah; go,aanqaadashada, qofku hadduu go,aan qaadan karin, mas’uul ma noqon karo!
Diinta islaamku in badan, ayey ka hadashay mas’uuliyadda. Waxaa jiro xadiisyo iyo Aayada badan oo ku soo arooray. Sida xadiithkii ahaa; “Nin walbo raciyadiisa ayuu ka mas’uul yahay, kan arijirka ariga ayuu ka mas’uul yahay” oo waa inuu ka ilaaliyaa dugaagga, darayada Iwm
Xilligii Nabi Daa’uud uu arlada ka talinayay, ayaa waxaa u soo dacwootay, beeralleey manfacoodii ari ka daaqay. Nabi Daa’uud waxuu xukmiyay, in dadka beerta laga daaqay, badalkeedi ariga u qaataan. Wiilkiisii Suleman oo goobjoog ahaa, ayaa isaguna markiisii ku hadlay wax uu Eebbe ku ilhaamiyay, maadaama uu laftiisu Nabi noqon doono Waxuu uu weydiiyay su’aal mas’uuliyad ka muuqato, oo aheyd; “Ariga hadduu beerta daaqay maalin cad, waxaa qaladka iska leh ninka beerta leh, oo dayacay maalkiisii, haddii uuse habeen daaqay, waxaa qaladka iska leh ninka ariga leh, oo dayacay mas’uuliyaddii ka saarneyd xoolihiisa” haddaba, waxaa la ogaaday in arigu habeen uu beerta daaqay, markaasuu Nabi Suleyman xukunkan riday.
Dadka beerta laga daaqay ariga ayey dhaqanayaan, kuwa ariga lahaana beerti ayey tacbayaan, marki ey beerti sidii ey aheyd ka dhigaan, ayaa arigoodii loo soo celinayaa, beertana lagu wareejinayaa dadkii lahaa.
Haddaba, mas’uuliyaddu ma aha wax la dhayalsan karo, haddey naftaada noqon laheyd ama dadka iyo dalka aad mas’uulka ka tahay. Sidaasoo kale ayey diintuna mas’uuliyad kaa saran tahay, Xadiith baa ahaa; “Ilaahey waxuu ugu jecel yahay, qof howl qabtay, oo howshiisii si hufan u gutay”.
(WALIGAA MASUULIYAD MUUJI)
Saciid Muuse (Ustaadka)